I-Les Chalets du Lac Grenier - Deux Pins Droit - I-Airbnb
I-Les Chalets du Lac Grenier - Deux Pins Droit
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPhilippe
I-Les Chalets du Lac Grenier ibonelela ngeendlwana ezi-7 zodidi oluphezulu ezirentwayo ezibekwe kwindawo engama-35 ephambi kwamanzi. Iindlwana zethu zinefenitshala ngokupheleleyo kwaye ziyafumaneka ukuba zirente unyaka wonke. Zonke iindlwana zethu ziphambi kolwandle, kumaqashiso amakhulu anemithi (i-avareji ye-51,000 square feet nganye). Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide kukuhamba iyure enye ukusuka eMontreal eLanaudière.
I-spa yangaphandle ibekwe kwindawo yokuphumla. Ivulwa unyaka wonke kwaye inombono okhethekileyo wechibi. Iyafumaneka kubo bonke abathengi bethu bendawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
Le ndlu yangasese, eyakhiwe ngo-2006, ixhamla kumbono omangalisayo wechibi. I-cottage inokuqeshwa ngokupheleleyo (amagumbi ama-4) okanye ngokwahlukileyo (amagumbi amabini okulala): i-walk-way yangaphakathi idibanisa ii-cottages ezimbini. Indawo kunye ne-angle, kunye neendonga ezimbini zangaphandle ezahlula ii-cottages ezimbini, zivumela ukusondelana okukhulu xa ii-cottages ziqeshwa ngokwahlukileyo.
I-spa, i-skating rink (echibini), indawo yokudlala yangaphandle yabantwana kunye neendlela zokuhamba ngeenyawo okanye izicathulo zekhephu zifumaneka ngokuthe ngqo kwindawo yokuphumla. Ezi nkonzo kwabelwana ngazo nabanye abaxumi bendawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
Iintsuku eziyi-7 e Chertsey